Green unere: ezi na ihe ọjọọ, ị nwere ike iri nri ha na ha - Mkpụrụ ubi - 2019
Ahịhịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọ bara uru?
Anyị, ndị mmadụ bi n'ebe dị anya site n'ebe ndịda, ajụjụ banyere ụdị agba a banana nwere ike iyi ihe dị iche, azịza ya dịkwa doro anya: nke ọma, n'ezie, odo! Ma ọ dịghị mkpa ọ bụla. Akwa na-acha uhie uhie, oroma, oji na ... na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ! Nke a bụ mkpụrụ osisi kachasị ọhụrụ na mkparịta ụka.
Ọ ga-ekwe omume iri mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Maka usoro obi
Maka tractes digestive
Maka usoro muscular
Maka usoro ụjọ
Maka ọnọdụ nke ezé na ọkpụkpụ
Ọ ga-ekwe omume
Mgbe ọ na-efu ibu
Kedu ihe i nwere ike ime na ha
O nwere ike imerụ ahụ
Kaịlị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adabere n'ụdị dị iche iche.
Ọ dị mkpa! A na-ekewa ụdị ụdị unere niile n'ime ụzọ abụọ: akwụkwọ nri, ha buru ibu, na ihe oriri, obere na ezigbo ụtọ. Ihe dị iche n'etiti ihe abụọ ahụ bụ na ọ na-eri nri ndị ahụ, a ghaghị isi ya.
A na-akpọ mkpụrụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha odo odo "platano" ma ọ bụ "plantin". Ha bụ calorie kachasị na gburugburu ndị ikwu ha.
100 g nke mkpụrụ a nwere 90-145 kcal, na mgbe ọ rutechara oke (yellowing), ọdịnaya caloric na-aba ụba nke ukwuu, na-eru nso 110-156 kcal.
N'ihe dị iche iche nke mkpụrụ osisi dessert, a na-ahụ ụkpụrụ dị iche iche: ọ bụrụhaala na mkpụrụ osisi nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ha nwere ihe dị ka 110 kcal kwa 100 g, mana ka ha tozuru okè, ihe oriri ahụ na-ebelata 95 kcal. Nri bara uru nke banana anumanu bu pasent 21% nke mmanu carbohydrates (starch, mono- na disaccharides), protein%% na 0.7% abụba (na nha percent nke acids graze na polyunsaturated na ngwaahịa a bu otu ihe).
Mụtakwuo maka uru nke unere, nakwa otu esi esi mee ma ọ bụrụ na ọ dị irè nke a mịrị amị.
Ihe dị ka pasent 74 nke mkpụrụ osisi ahụ bụ mmiri, ihe karịrị 1.5% bụ eriri nri (eriri).
Nchịkọta vitamin nke mkpụrụ osisi ahụ adabereghị na agba ya.
Lee ebe a:
vitamin A (retinol na beta-carotene);
N'etiti mineral nke unere ahụ bara ọgaranya, nke mbụ, a ghaghị ịkpọpụta ihe ndị dị n'ime igwe:
potassium - 348 mg;
phosphorus - 28 mg;
E nwekwara ụfọdụ ihe ndị e ji eme ihe na pulp - fluorine, selenium, ígwè, manganese na zinc. Amino acids dị oke mkpa dị ka lysine, methionine, tryptophan dịkwa oke mkpa n'ime ihe ndị ahụ.
Otú ọ dị, ihe niile dị n'elu dị na ma odo na mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ. Mana ọdịiche dị ukwuu na mkpụrụ osisi ahụ, n'ihi nke ndị ọkà mmụta sayensị na-esiwanyewanye na-ekwu banyere uru ka ukwuu nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, bụ ọnụnọ n'ime ha nke na-adịghị agwụ agwụ (n'usoro sayensị - eguzogide) starch.
Ọ dị mkpa! Starch eguzogide nwere ezigbo mmetụta na obi. Ọ na-adịghị agwụ na obere eriri afọ, na-abanye na colon, ebe usoro ịgba ụka ahụ na-ewere ọnọdụ. N'ihi ọdịdị a, ngwaahịa a na-enye gị ohere ịnọgide na-enwe mmetụta nke zuru ezu ruo ogologo oge. Tụkwasị na nke ahụ, usoro mmeputakwa nke microflora bara uru n'ime eriri afọ, nke mkpali starch na-ejighị digestible kpaliri, na-ebelata ihe ize ndụ nke kansa n'ime akpa a.
Ya mere, n'ihe gbasara ihe mejupụtara chemical na ọdịnaya caloric, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ezie na ha yiri ndị ogbo edo ha, n'otu oge ahụ, nwere uru ụfọdụ.
N'ihi nke a, ndị bi na mba okpomọkụ, na n'azụ ha, na ọtụtụ ndị Europe na-ahọrọ iri nri dị nnọọ iche na mkpụrụ osisi ahụ.
N'akwụkwọ ndị a ma ama, ọ na-esikarị ike ịchọta okwu ahụ bụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ụfọdụ ụdị osisi okpomọkụ. N'eziokwu, ọ bụghị. N'ime àgwà ndị dị iche iche nke mkpụrụ mkpụrụ a abụghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọdị edo edo ọ bụla na-acha odo odo nwere ụdị ụcha a tupu ọ na-acha ọcha, ihe ọ bụla ọzọ bụ ihe ọ bụla karịa ahịa ahịa. Mana nke a apụtaghị na nkwupụta banyere uru nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anwụrụ bụkwa akụkọ ifo, ma ekwela ka e ghọgbuo gị site n'ịkwụ ụgwọ maka ihe na-adịghị ahụkebe.
N'ezie, ọ ga-ekwe omume, mana ọ bụghị n'ụzọ anyị si eme ya.
Ị ma? Enwere akwukwo akwukwo nri ndi mmadu no n'ime obodo ndi ozo (nke bu ndi Brazil) esi nri ma rie dika anyi si eme poteto. Mkpụrụ ndị a na-ere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'ihi ya, ọ na-adịrị ha mfe ibufe na igbu oge oge mmebi. Otú ọ dị, ebe ọ zụrụ ụdị "mkpụrụ osisi" ahụ, onye nnabata ahụ na-ebu ụzọ mee ka ọ dị njikere n'ebe gbara ọchịchịrị, na-eji akwụkwọ eji ya. Mgbe mkpụrụ ahụ tụgharịrị edo edo, ọ na-akpụ ya (ya na mma, ọ gaghị arụ ọrụ na aka ya, akpụkpọ ahụ siri ike) ma sie ya ma ọ bụ sie, ma jiri ya mee ihe dị ka efere nri n'akụkụ isi nri.
Ọ dịghị ihe ọ bụla zoro ezo nye onye ọ bụla na uneba na-adaba n'elu ụlọ nke ụlọ ahịa anyị. Otú ọ dị, ịzụrụ ụdị ngwaahịa a, anyị enweghị ihe ọ bụla. Ị nwere ike ichere ruo mgbe ọ na-agbanwe edo edo, mana ị gaghị eme nke a. Ma otu ọnọdụ.
Nke bụ eziokwu bụ na a pụghị iri nri na-acha akwụkwọ ndụ. A ghaghị itinye ha na ọgwụgwọ okpomọkụ, n'ihi na starch dị n'ime ha enwebeghị ohere ịgbanwe ghọọ shuga.
Iri mkpụrụ dị otú ahụ na mbụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka ịcha ata poteto. Ihe oriri dị otú a anaghị adabara afọ anyị, nke a na-agbanyeghị adaba, ma ọ bụghị na ọ nwere uto na-atọ ụtọ.
Akwukwo nri na-adighi aka (ihe ndi a, dika o di nwute, na-adighi adighi ike), apughi eri ya, ma apuru ime ya.
Ya mere, ọ bụrụ na ị maghị na e nwere "ọpụrụiche" dị mma n'ihu gị, ma ọ bụghị mkpụrụ osisi na-eri nri wepụrụ site n'oge ruo n'oge, enwela obi nkoropụ: n'ihi na onye amụrụ ma biri na oyi na-atụ, nke a bụ ihe atụ. Zụrụ ma jiri obi ike rie, obụpde, simmer ma ọ bụ blanch!
Ya mere, ka anyị tụlee uru nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ọ dị mkpa! Otu banana nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpokọta pasent potassium kwa ụbọchị.
A na-eburu uru nke mkpụrụ osisi na-emebeghị agadi maka usoro obi na-edozi site na ọdịnaya potassium dị elu.
Mmiri Hawthorn, hellebore, chervil, European wiper, cantaloupe, radish, roqueball, nettle nwere mmetụta dị mma na usoro obi.
Potassium na-ekere òkè dị mkpa n'ịnọgide na-enwe obi ọmịiko. Na-eme ka ọbara mgbali dị n'ime arịa ahụ, ihe a na-emepụta ọgwụ na-enye mgbochi nke atherosclerosis, ọbara mgbali elu, angina pectoris na ọrịa ndị ọzọ metụtara ọrịa obi.
Anụ anụnụ anụnụ bụ isi iyi starch na-eguzogide ọgwụ, mgbe anyị na-eri mkpụrụ osisi chara acha, anyị na-enweta shuga. Kedu ihe dị iche n'etiti ihe abụọ a maka eriri afọ anyị, anyị ekwuola.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Mkpụrụ osisi tropic na-agụnye omekota omega-3 nke polyunsaturated, nke, n'etiti ihe ndị ọzọ bara uru, nwere mmetụta bara uru na mmepụta nke enzymes n'ime afo na eriri afọ.
A na-ahụ Omega-3 na anyụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ụtọ, actinidia, cashews, walnuts, letus, arugula.
Tụkwasị na nke ahụ, e nwere otu nsụgharị (a chọpụtabeghị) na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ọ bụghị nanị igbochi mmalite nke ọnyá afọ, kama ọ gwọọ ọrịa ahụ.
Usoro ọgwụgwọ bụ na mkpụrụ osisi pulp, na-abanye n'ime afo, na-eme ka acid ghara ịdị na-arụ ma na-arụ ọrụ na mgbidi ya dị ka mmanụ na-esi ísì ụtọ, na-eme ka e nwee mgbidi, bụ nke, n'aka nke ya, na-echebe afo site na mbibi na ọnya (ọnya) .
Ị ma? O siri ike, site na echiche nke botany, otu banana bụ osisi, osisi ahụ bụkwa ahịhịa.
Ihe ndị na-arụ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ anwụrụ na-eme ka ihe niile dị n'ime ahụ na-eme ka ahụ dị elu, na-eme ka afo na-arụ ọrụ ma na-eme ka mkpịsị ụkwụ eriri. Nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi eriri na mkpụrụ.
Ma ọ bụrụ na eriri nri na-enyere aka izere afọ ntachi, mgbe ahụ site na afọ ọsịsa, banana dị oji bara uru n'ihi na ọ na-egbochi nsogbu kachasị dị ize ndụ nke ọnọdụ a - agụụ mmiri.
Bilberry, ube, hazel, black chokeberry, cornel, na persimmon nwekwara uru maka afọ ọsịsa.
N'ebe a, ọ dị mma icheta potassium. Nke a, tinyere calcium na phosphorus, na-anọkwa na mkpụrụ ahụ, na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji nọgide na-enwe nkwụ nnu na ntan ahụ, nke, n'aka nke ya, na-emetụta usoro muscular. Ke adianade do, iji nọgide na-enwe ụda ahụ, gbochie ihe omume nke spasms, cramps, overexertion, ahụ kwesịrị ịnọgide na-enwe oke dose nke sodium. Dịka anyị na-echeta, a pụkwara inweta ịnweta ihe a site na mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi nke ebe okpomọkụ.
Maka usoro ụjọ, ihe bara uru bụ vitamin nke ìgwè B nwere mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ.N'ihi mmetụta ha, anyị na-anagide nrụgide karị, wepụ nsogbu na nchekasị, na-ehi ụra n'abalị.
Akwukwo amino acid tryptophan kwa, nke di na nchikota na-akwalite nkwuputa n'ime ụbụrụ anyị nke otu n'ime hormones kachasị "ụtọ" - serotonin.
Site n'ụzọ, ihe a anaghị eme ka anyị nwee obi ụtọ, ọ bara ezigbo uru maka usoro muscular na arụ ọrụ ahụ, mana ọ na-ekelekwa ya ka a na-agbakọta ọbara, nke a bụ, na a pụrụ isi kwuo ya, unere na-akwalite ọrịa na-agwọ ọrịa.
Ndị vitamin nke otu B na-emetụta ọrụ nke ụbụrụ. Ha na-eme ka ncheta dị elu, na-emekwu ka uche dịkwuo mma, belata mmetụta nke ike ọgwụgwụ.
Utu nke ugu, honey suckle, sunberry, saffron, apụl, rosemary, na-acha ọcha currant mma ncheta.
Ọ baghị uru maka "isi" anyị na potassium ahụ a kpọtụrụ n'elu.
Ya mere, ndị mmadụ na-arụ ọrụ uche, yana ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ n'oge ule ahụ, ọ bara uru ịgụnye ha nri nri nke mkpụrụ osisi na-acha ahịhịa ndụ.
Calcium, dị mkpa maka ezé na ọkpụkpụ, dị na acha anụnụ anụnụ, ma nke a abụghị ihe dị n'ime ha, dịka ọmụmaatụ, na cheese ma ọ bụ curd.
Ma mkpụrụ ọrụ ebube ndị a nwere ike ijide calcium n'ime ahụ, nke mere na uru ha maka usoro skeletal bụ ihe a na-ahụ anya.
Mkpụrụ osisi vitamin na mineral bara uru ọ bụghị naanị maka akụkụ ahụ anyị, kamakwa maka ọdịdị anyị.
Iji mee ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ ma dị mfe, ị nwere ike iji ngwaahịa a dịka ihe oriri, ma ọ bụ na ị nwere ike itinye ya na ihe dị iche iche na ịchọ mma nke ọma, bụ nke nwere ahụmahụ mara mma.
Ị ma? Ewoo, mmadu nwere ihe ize ndụ nke ịbụ onye na-enweghị mmanya na-adịghị anya. Ná mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, ụdị nro dị iche iche pụtara na ugwu ọwụwa anyanwụ South America kpọrọ "ọrịa Panamania"; ọ na-ewe iwe ọkụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewute ụdị osisi dị iche iche dị na Gros-Michel, bụ nke dị ebube na uto ya. Ngwurugwu na-agbanwe ngwa ngwa karịa ndị ọkà mmụta sayensị nwere oge iji "mepụta" ụdị unere ọhụrụ ndị na-eguzogide ọgwụ ahụ, onye ga-emeri agbụrụ a ka dịkwa mkpa.
Ihe ọ bụla anyị nwere ike ikwu maka ọtụtụ uru bara uru nke unere, ngwaahịa a ka na-eme ọhụụ ma bụrụ ihe ọhụrụ nye anyị.
N'ihi nke a, na oge ụfọdụ nke ndụ gị, nakwa na ọnụnọ ụfọdụ ọnọdụ ọmịiko, ọ bara uru na ị na-emeso ihe oriri dị otú ahụ na iji nlezianya dị mma, ma ọ ka mma ịkpọtụrụ dọkịta gị tupu oge eruo. Ma anyị ka na-eme ụfọdụ ndapụta.
Mmiri vitamin na mineral nke unere na-eme ka ha maa mma nke ukwuu maka oge ha dị ime. Ọ dị ezigbo mkpa ka nne na-atụ anya inweta ọgwụ nke ọgwụ folic acid, potassium, calcium na phosphorus.
A na - achọta acid dị na shallots, eyịm green, quince, sea buckthorn, zucchini, black radish, kivano, piich.
Ma, ihe oriri ọ bụla na oge a adịghị mma. Akwukwo ahihia anumanu nwere ike ime ka nsogbu nke nne na-atụ anya nke nwere oria ogwu, mee ka o nwee ike idozi ya nke oma.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na, tupu mmalite nke afọ ime, nwanyị na-eri nri ahịhịa ndụ ma na-enwe obi ike na ọ maara otú e si ahọrọ na esi nri ha, ọ dịghị ihe ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ị kpebie ịchọpụta ngwaahịa bara uru, ọ ka mma ichere maka oge "nchekwa".
Ihe ndị a na-emetụta kwa oge nke ị na-enye nwa ara. Na steeti a, njikọ dị n'etiti ihe nne na-eri na ihe ize ndụ nke nwatakịrị abụghị kpọmkwem dị ka ọ dị n'afọ ime, ma a ka nwere ịkpachara anya.
Ma, na-arịa ọrịa shuga, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ adịghị mma karịa ndị edo edo, n'ihi na ha nwere obere shuga, na starch na-eguzogide ọgwụ adịghị eme ka mmụba ọbara dị elu.
Mana nke a apụtaghị na ngwaahịa dị otú ahụ na-eri nri nke onye ọrịa nwere ọrịa shuga, n'ihi na anyị ka na-ekwu maka mmanụ aṅụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọrịa nke ụdị nke mbụ na nke abụọ na-esonyere na nri dị iche iche, ya mere, ọbịbịa nke ngwaahịa ga-adị n'otu n'otu.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, a ga-eri ya naanị ma ọ bụrụ na onye dọkịta nyere gị ikike, na obere obere na ịgbaso nlekọta ahụike siri ike.
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ihe onwunwe nke starch bụ nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ogologo oge nke na-esonyere mkpochapụ nke ihe a n'ahụ. Maka onye na-arịa ọrịa shuga nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu.
A na-achọta starch na asparagus, tonip, egusi, buckwheat, agwa bekee.
Akwukwo ohia bu ihe ozo di iche iche na-acha odo odo maka ndi na-ekiri ha. Ebe ọ bụ na, n'ihi peculiarities nke ngwongwo chemical ahụ, ngwaahịa a na-enye gị ohere ịnọgide na-enwe mmetụta nke zuru ezu ruo ogologo oge, n'oge oge mgbapụta ọnwụ, nke a bụ ihe ị chọrọ.
Ọ bụrụ na, ịzụta obere banana, anyị, na-echeghị echiche ugboro abụọ, wepụ ya na ya ma rie anụ dị nro, nke nwere mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ dị otú ahụ dị mfe ọnụ ọgụgụ agaghị arụ ọrụ.
Ị nwere ike ịnwale, dịka ha na-ekwu, mana uto bụ obe n'etiti raw poteto, apụl, cucumbers na persimmons, na ísì bụ, iji mee ka ọ dị nro, ọ bụghị oke obi ụtọ.
Ọ dị mkpa! Green bananas kwesịrị esi nri!
Lee nhọrọ abụọ. Akpa: chee na anyi nwere mkpuru osisi, ma mee ka ihe di uto. Nke abụọ: dị ka ndị bi n'ọtụtụ mba ebe okpomọkụ, na-eme ka banana dị ka ihe oriri. Ụzọ nri nwere ike ịbụ ihe ọ bụla: esi nri, frying, stewing, baking or steaming, ma na akpa ikpe anyị na-eji sugar dị ka isi isi na nnu na nke abụọ.
Ebe ọ bụ na ị gaghị eju onye ọ bụla anya na unere, anyị na-akwado uzommeputa maka nri nri biya.
Na mgbakwunye na obere mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, anyị ga-achọ:
esi nri mmiri - 1-2 lita;
lemon ma ọ bụ wayo - 1 ibe;
mmanya ma obu apple vinegar - 2 tablespoons;
mmanụ nri (olive ma ọ bụ sunflower) - 2 tablespoons;
nnu, ose na-atọ ụtọ.
Akpa tinye ahihia ka ị ghara ịkwa. Mgbe mmiri na-esi esi, anyị na-ewepụ akpụkpọ ahụ site na mkpụrụ ahụ, na-ejiri mma mee ogologo oge (lezie anya ka ị ghara ịkwa anụ ahụ), ebe ọ gaghị arụ ọrụ ịchacha mkpụrụ osisi na-enweghị mkpụrụ na aka anyị. Ghaachaa mkpụrụ ahụ n'ime mmiri salted, weta ya na obụpde ọzọ, na, wepụ ọkụ ahụ, hapụ ka ị ghara ịkwaa ruo minit 10.
Ka ọ dịgodị, mee garlic ihendori. Na efere ndị a kwadebere na-etinye garlic na-acha, tinye mmanụ, mmanya, nnu, freshly ground black pepper. Mezue ihendori na lemon (wayo) ihe ọṅụṅụ ma kpoo ya.
Gbakwunye na mmiri nke a na-esi esi nri, otu iko mmiri sie mmiri iji kwụsị usoro esi mmiri, wepụ ihe oriri na ọkụ ma mee ka mmiri dị jụụ. Anyị na-ewepụta mkpụrụ osisi ndị a kụrụ agwa ma bee ha n'ime ihe yiri mgbaaka 1 cm n'obosara.
A na-eji ákwà na-etinye garlic na tebụl. Achịcha ahụ dị njikere! Ị nwere ike iji ya dị ka nri, ị nwere ike ijere nri dịka nri maka anụ ma ọ bụ nri mmiri.
Ị ma? Na 30s nke narị afọ gara aga na Germany, a na-akpọ "mkpụrụ" ndị na-abụghị ndị mba ọzọ ", ebe ọ bụ na e jiri ego dị mkpa iji zuo ha maka nzube ndị ọzọ. Ọbụna otu mgbasa ozi zuru ezu n'etiti ndị dọkịta bụ ndị kwuru na iri nri ga-eme ka a ghara ihichapụ ihe.
Nti nsị bụ nnọọ ihe siri ike. E jiri ya tụnyere ndị ogbo ya, mkpụrụ a adịghị ka ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-akpata allergies. Nsogbu intestinal, bloating na flatulence nwere ike na mbụ ebe mgbe, n'ihi enweghị uche, anyị na-amalite iri green bananas raw.
Otú ọ dị, iji belata ihe ize ndụ ndị nwere ike ịnweta, ndị ọkachamara na-atụ aro ịhapụ iri ngwaahịa a tinyere nnukwu mmiri. N'ezie, ọ dị ize ndụ iri nri nwere ihe ndị na-emepụta ọgwụ, ma ihe ize ndụ ndị a na-emetụtakwa na ngwaahịa ọ bụla na-adịru ogologo njem (ezubere maka nchekwa nchekwa oge).
Maka ihe kpatara nchekwa, a na-atụ aro mkpụrụ osisi ahụ ka mmiri saa mmiri tupu ị malite ịdị ọcha.
A ghaghị ilekọta nlekọta pụrụ iche mgbe ọ na-abịakwute ndị nwere akụkọ ihe mere eme nke varicose veins ma ọ bụ thrombophlebitis. Ihe ize ndụ bụ ndị na-arịa ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa strok.Ikike nke mkpụrụ osisi iji mee ka ọbara dị elu maka ụdị ụmụ amaala bụ ihe onwunwe na-adịghị mma.
Ma, n'ezie, emela ihe ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ green. N'ịgabiga mkpụrụ nke mkpụrụ osisi abụọ kwa ụbọchị, anyị nwere ohere ọ bụla iji mee ka nri dị otú ahụ ghara ịba uru ma dị ize ndụ. Bana bụ ngwaahịa dị iche iche, nke ka mma iji na-achaghị acha karịa ụdị mfri. Ikekwe, ọ bụghị ihe tọrọ ụtọ na ihe na-esi ísì ụtọ, ọzọ, ọ bụ ihe na-eweta nsogbu na ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ nke mbụ na, nke kachasị mkpa, bara ezigbo uru.
Kedu otu esi azụlite ọkụkọ levamisole
Osisi Apple nke nwere aha mara mma - Aphrodite
Gịnị mere oyi garlic ji atụgharị edo edo na mmiri na ihe ị ga-eme
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ahịhịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọ bara uru?